चलचित्र फ्लप भएपछि शोभित भन्छन्ः महानायकको म्युजिक भिडिओ खोइ ट्रेन्डिङमा? – Dainik Sangalo
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक ०७, २०७८ समय: १२:५०:५०
शोभित बस्नेत फेरि विवादमा आएका छन्। लगातार राजेश हमाल महानायक होइन भनेर विवादमा आएका उनले हमालको फोटोलाई प्रमुख अतिथि बनाएर माफी नै मागेका थिए।
पछिल्लो समय आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘डाँडाको बरपिपल’ फ्लप भएपछि बस्नेत पुनः महानायक विवाद उत्कृर्षमा पुर्याउने दाउमा देखिएका हुन्। यसअघि उनका चलचित्रका गीतमा लाइकभन्दा बढी डिस्लाइक आएका थिए।
लगत्तै चलचित्र हेर्न आएका दर्शक औंलामा मात्र गन्न सकिने संख्यामा थिए। हलबाट बस्नेतलाई खासै आम्दानी हुन सकेन।
यसबीचमा उनले महानायकको आतंक फैलाएर आफ्नो चलचित्रविरुद्ध माहोल बनाउनेलाई भविष्यमा राजेश हमालको चलचित्र हिट बनाएर देखाउन उनले चुनौति दिएका छन्।
उनी भन्छन्,‘महानायकले खेलेका म्युजिक भिडियो ट्रेन्डिङको टप ५० मा पनि किन नआएका हुन्? उहाँले चलाएका टेलिभिजन प्रोग्राम किन सुपरहिट नभएका?’
आचार्य गत भदौ १० गते शेरधन राईको स्थानमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री भएकै बेला अल्पमतमा परेका आचार्यले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव असोज २५ गते सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।
९२ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा दल विभाजन भएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । संसदमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा सत्तारूढ दल एमालेसँग ४१ जना मात्रै सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा ५० जना सांसद छन् । केन्द्रीय तहको सहमतिअनुसार प्रदेश १ र बागमतीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेका कारण मङ्गलबारसम्म प्रदेश १ ले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने तयारी रहेको छ ।
आइतबार विश्वासको मतदानपछि गठबन्धनको तर्फबाट राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।
Last Updated on: October 24th, 2021 at 12:50 pm